Lauren RAJAOBELINA · Novambra 2012 · Global Voices teny Malagasy
Lauren RAJAOBELINA · Novambra, 2012
Lahatsoratra farany an'i Lauren RAJAOBELINA tamin'ny Novambra, 2012
Azia Atsinanana30 Novambra 2012
Tamin'ny fandaharan'asa fanomezana vatsim-pianarana io, indroa niatrika fihaonambe ireo mpanao gazety 22 avy any Afghanistan sy Pakistana, ny iray tany Islamabad ary ny faharoa tany Kabola mba hisian'ny fifankahazoana sy fifampizaràna ny zava-tsoa ary hifanakalo kolontsaina. Nosoratany ireo traikefa ireo ary nampitondrainy ny lohateny hoe 'fifankahazoan'ny mpifanolo-bodirindrina' ary vVonona hanao...
Fakàna An-Keriny Mpanao Gazety Tany Kyrgyzstan: Sangisangy Ratsy sa Heloka Be Vava?
Mediam-bahoaka19 Novambra 2012
Nampitahorina tamin'ny basy sy notampenana maso no nakàna an-keriny azy ary nentina tany an-tany efitra. Avy eo nobaikoana hanala ny ampahany amin'ny fitafiany ary lehilahy maro be no nandrahona ny hanolana sy hamono azy. Avy eo, nolazain-dry zareo fa sangisangy ireny rehetra ireny.
Amerika Latina14 Novambra 2012
Efa nambaranay tany aloha ny hackathon manaraka ho an'ny faritra Amerika Latina : Fampandrosoana an'i Amerika Latina 2012. Saingy mety tsy fantatry ny mpamaky maro ny dikan'ny hackaton na ny antony ilàna azy. Eto izahay dia manandrana mamaly ireny fanontaniana ireny amin'ny famaritana, ohatra, ary lahatsary resadresaka roa miaraka amin'i...
Kiobà: Nafoanan'ny Governemanta Ny Famerana Fandehanana Ho An'ny Olom-pirenena
Amerika Latina01 Novambra 2012
Tamin'ny 16 Oktobra, no nanambaràn'ny governemanta Kiobàna ny drafitra hanafoanana ny famerana ny fandehanana mampisalasala ho an'ny olom-pirenena Kiobàna. Ampiharina amin'ny Janoary 2013 io politika io.